Isitshayina Youngsters - Besoyika ukuba Abe kwi Ezinzima Budlelwane Elaine Dai
Isitshayina Youngsters – Besoyika ukuba Abe kwi Ezinzima Budlelwane Elaine Dai
“Andizange fumana girlfriends kwi ezo-intanethi dating apps.”MOLO Tan thathwa, ngubani a ubudala umdwelisi ka-Xiao Igesi in Shijiazhuang. Loo-intanethi dating apps MOLO sele kukhankanywe, kuquka Tanta, Momo, njl. njl, ingaba widely yamkela yi-Isitshayina youngsters, kunye nomnikelo phambili iselula technique-Intanethi udibaniso. Nangona kunjalo, ezi apps, apho ekuqaleni ingaba yenzelwe kuba omnye abantu ukufumana zabo olugqibeleleyo partners, kuba thatha kuba medium kuba abantu abakufutshane ezama casual ngesondo. Oku asikuko uncommon onikiweyo ukuba uxinzelelo kuba ezikhokelela a ndonwabe ubomi kwaye iindleko kuba umtshato zi-phinda, apho frightened youngsters, ingakumbi kwi-tier izixeko, ukufumana girlfriends kwaye bafuna ngenye relaxed budlelwane nabanye kwi-intanethi dating apps. Endaweni ingxowa -“inyaniso uthando”kwi Tanta, MOLO wachaza ukuba lowo usebenzisa ngayo xa yena uziva ngathi usasebenzisa yedwa kwaye boring.”Ke exciting kwaye andiqondi kufuneka worry malunga elizayo.”MOLO ke inika umsebenzi kuye weekends ngaphandle kwaye lowo ubomi kunye abazali bakhe.
Kuba kuye, ngenxa a ezinzima budlelwane, ngolohlobo gambling, kuthetha overloading imveliso kwaye”ngubani owaziyo”buyela.”Ngoku iindleko umtshato ngu skyrocketing, kwaye kubaluleke kakhulu kuba nzima kum tyhala ozayo kunye wam career kwaye jonga emva girlfriend ngexesha elinye. Mna nento yokuba ngenye sebenzisa Tanta ukufumana ngokwam i-one-day iqabane lakho.”Kuba youngsters njenge MOLO, kubaluleke ngokwenene a nangona sikwimeko yoqoqosho enzima ingxaki kuba nabo ukuba babe kwi ezinzima budlelwane. Kunye engaziwayo elizayo, ngempumelelo umtshato lusekelwe ezilungele imeko yezoqoqosho macala kodwa hayi nyani uthando phakathi pair of ezimbalwa. Ke ngoko, abantu baya kuba lula prone ukusebenzisa i-intanethi dating apps, eziya ngokukhawuleza kwaye icacile, ukufumana yethutyana umdla kwaye intuthuzelo. Kanjalo, kuba ngenene convenient ukufumana iqabane lakho, Tanta ibonisa ukuba abasebenzisi’ imifanekiso, iminyaka, imisebenzi, kwaye nkqu uluhlu lwezinto ezikhethwayo. Abasebenzisi unako ukuthumela”njenge”okkt ukuze babe ngathi, okanye abanako ukuba ezilungele ukuze ube kanti budlelwane.”Emva konyaka omnye ukusukela Tanta waba waseka, inani yayo abasebenzisi ufikelele yezigidi,”watsho Yu Wang, edibeneyo i-CEO Tanta.
Elinani ngu-hayi uncommon ukwazi amava MOLO
Abaninzi Isitshayina young abemi kokudlula nzima ixesha yokufumana watshata. Ngokunxulumene-manani akukho mlinganiselo Shinai Iwebhusayithi, loomama kwezoqoqosho yokuba zilawulwe kuba abantu kanjalo climbing phezu abafazi cinga, RMB lelona nani liphantsi kuba abantu ke umvuzo, kwaye.
omnye abafazi kufuna ukuba abantu ke umvuzo kufuneka khona, RMB
Yintoni ngaphezulu, ngenxa yokuba ukuba yokuba zilawulwe ukufumana watshata, ubuncinane, kuquka i-apartment kwaye imoto, vumelani kuphela i-formidable iindleko kuba enye wedding, kuyenza ezininzi omnye gentlemen shun nkqu ukususela ekubeni kwi ezinzima budlelwane. Kwi-China, kukho phantse yezigidi omnye amadoda nabafazi, ngokunxulumene ingxelo ye-China ke Kubulungiseleli ka-Zasekuhlaleni Imicimbi. Ngoko ke, abaninzi omnye youngsters ayoyika ka-ingxowa-a ubomi-elide iqabane lakho kwaye ke ngoko, i-avareji ubudala yokufumana watshata ngu-jikelele. Kwaye ujonge emva girlfriend boyfriend idla kuthatha iminyaka’ ixesha elide, nto leyo imposes omkhulu uxinzelelo abo career starters.”Ndifuna nje waphula phezulu ne-bam girlfriend ngenxa cruel inyaniso kwaye mna nje wabaleka waya Tanta ukufumana ezinye relaxing ubudlelwane phakathi.”Njengoko MOLO recalled, ebizwa-true love lula tearing phantsi kwi-phambili inyaniso. Ngoko ke, akukho nimangaliswe ukuba yezigidi abantu basebenzisa i-intanethi dating app ukufumana enye-busuku kuma kwaye walile ukuba begin a budlelwane. Ngaphandle ukususela kweli, ngokukhawuleza-siphuhlisa lizwe kanjalo isizathu sokuba kutheni oku phenomenon kuya kwenzeka. Kunye lemfundo ephakamileyo kuphakanyiswe abahlala esezantsi, ubomi pursuit abantu nayo itshintshile. I-pursuit ka-imathiriyali sele weighed ngaphezu pursuit luthando, ingakumbi abantu abaya kuphila elikhulu izixeko. Shinai Iwebhusayithi yatyhila ukuba Shenzhen, Beirut, i-shanghai, Wuhan, kwaye Guangzhou ingaba phezulu izixeko apho loomama yokuba zilawulwe kuba abantu ngu ephezulu.”I-girls kwi-Beirut ingaba ngakumbi vula-minded ngakulo oku uhlobo budlelwane kwaye ngaphezulu ngqo-phambili.”MOLO idityaniswe. Ngokukhawuleza uphuhliso kanjalo kuthetha phezulu iindleko ophilayo, phezulu iimfuno kwaye harder inkqubo kuba abantu ukufumana ezilungele omnye.”Xa ndiza kwi-Beirut, andinalo ixesha worry malunga umtshato ndiza worrying malunga ukuxuba kwi Beirut.”Kunye ngakumbi koxinzelelo ifakiwe kwi kwemiqolo yabo, imfuneko relax kwaye intuthuzelo drives kwabo ukusebenzisa Tanta. Ezilungileyo njengoko kunjalo, Tanta kanjalo ingozi kuba abasebenzisi ingakumbi kuba girls. Zisekhona ezininzi fraudulent izenzo kwaye iibhonasi uchazo kwi-app, apho kakhulu isizathu kutheni MOLO zange ifumanise a ezinzima girlfriend kwi Tanta.”Mna kanye zahlangana a kubekho inkqubela abantliziyo umboniso ke ezahlukileyo ukususela yakhe.”MOLO thathwa.
Uhlobo Internet kukuba ekuqaleni onesiphumo kwaye engaziwayo
Ke ngoko, kuyimfuneko kuba youngsters ukuba buza kuba ufuna iinkcukacha ezininzi malunga bolunye uhlanga kwaye bafunde njani ukukhusela ngokwabo xa intlanganiso partners kwi ezi-intanethi dating apps. Ukuba isixa phezulu, gloomy ubuhle belizwe ka-dating kwaye umtshato kwi-China kusenokuba eased ngezi-intanethi dating apps. Endaweni yokuba devoted kwabanye iminyaka emininzi ngelize, abantu bamele ezisuka zande banikele ngobunye ubusuku kubantu abahlukileyo. Nangona kunjalo, kukho akukho impumelelo umtshato ngaphandle iinzame kwaye igalelo, njalo musa kulahleka kule yethutyana ngexesha entertainment ukungahoyi ubomi bakho-elide inkampani
← Kwi-intanethi Incoko - free ividiyo-incoko Amagumbi
Iindlela Ukufumana Unbanned ukusuka Chatroulette - China Dating Ividiyo Incoko →